​ग्लोबल आइएमइ बैंकको ८५ औं शाखा कालिकोटमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आइतबारदेखि कणरलीको कालिकोटको मान्मामा ८५औँ शाखा बिस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उदघाटन राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले गरे । सो अबसरमा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद..
​मुक्तिनाथ बिकास बैंकले सिभिक डेभलपमेन्ट बैंक किन्ने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले धादिडमf रहेको सिभिक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । २०६३ साल पौष १९ गते देखि कारोवार सञ्चालन गरेको मुक्तिनाथ विकास..
​सानिमा बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानमा सरस्वती कुञ्ज कलेजका विद्यार्थी सहभागी
काठमाडौं । सानिमा बैंकले युवा पुस्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र महत्वको बारेमा जानकारी दिन शुक्रवार बैकिङ क्षेत्रमा विद्यार्थी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा सरस्वती कुञ्ज कलेजका २०..
सञ्चुरी बैंकको ९.४७ प्रतिशत लाभांस पारित, २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभाले ९.४७ प्रतिशत लाभांस पारित गरेको छ । बैंकको साधारणसभाले ६ प्रतिशत वोनस सेयर र ३.४७ प्रतिशत नगद लाभांस पारित गरेको..
राष्ट्र बैंकले पाँच अर्बको निक्षेप उठाउदैं, प्रणालीमा तरलता बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुसँग फेरि पाँच अर्ब रुपैयाँको निक्षेप खरीद गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार यसको बोलकवोल गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले कम्तिमा एउटा संस्थाको पाँच करोडको..
काठमाडौं । ग्रान्ड बैंक नेपालले पुँजी कोष अनुपात ९.२ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकले पुस मसान्तमा प्रकाशित गरेको पुँजी कोष अनुपातभन्दा यो १.४४ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । ‘पुस मसान्तसम्म हाम्रो..
काठमाडौं । वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ६ जिल्लाका विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानका निम्ति मेगा बैङ्क र सक्षम नामक वित्तीय सेवा प्रदायक निकायबीच सहकार्यको सम्झौता भएको..
​मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले आइपिओ जारी गर्दै, ६० हजार कित्ता
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चैत ४ गतेबाट सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर निस्कासन गर्ने भएको छ । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ६०..
​रिलायबलले पाँच प्रतिशत बोनस सेयर दिने, राधेश्याम अग्रवाल अध्यक्षमा सर्वसम्मतले चयन
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलिमिटेडले ५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको सोमबार सम्पन्न नवौ वार्षिक साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले..
एसियन लाइफको २८.५ प्रतिशत वोनस सेयर, पुँजी ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स्ले गत बर्षको नाफाबाट ३० प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको ८८औं सञ्चालक समितिको बैठकले २८.५ प्रतिशत वोनस सेयर र १.५ प्रतिशत कर प्रयोजनका..
​लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स १० प्रतिसत सेयर बोनस पारित
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको दशौं वार्षिक साधारण सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले लगानीकर्तालाई १० बराबर एकका दरले बोनस सेयर सेयर दिने प्रस्ताव पनि पारित..
​मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा तानसेनमा
पाल्पा । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो २४ औं शाखा तानसेन चोकमा खोलेको छ । पाल्पा क्षेत्र नं ३ का सभासद् हरिप्रसाद नेपालले शाखाको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा नेपालले जिल्लाको वित्तीय..
​ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले गौतमबुद्ध बिमानस्थललाई हृविलचेयर दियो
भैरहवा । नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक भैरहवा शाखाले निर्माणधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा आउने शारिरीक रुपक अशक्त र बृद्धबृद्धाको प्रयोजनार्थ दुई थान हृविलचेयर प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो बाषिर्क उत्सबको उपलक्ष्यमा सामाजिक..
​ग्लोबल आइएमईको धनुषामा शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाडौं । ग्लोबल अइएमई बैंकले धनुषको यदकुँहा गाविसमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । यो सहित बैंकका शाखारहित बैंकिङ सेवा ३२ स्थानमा विस्तार भएको छ । सेवाको बैंकका नायव प्रमुख..
ज्योति बिकास बैंकले सात प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं । ज्योति बिकास बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई सात प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक संचालक समितिले सात प्रतिशत बोनस शेयर भनी गरेको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई..
नेशनल लाईफले ३० प्रतिशत बोनससहित ३८ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नेशनल लाईफ ईन्स्यारेन्सले आफ्ना लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत बोनस शेयर ८ प्रतिशत नगद सहित ३८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको संचालक समिति बैठकले लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत बोनस..
​काटमाडौं । पछिल्ला दिनमा बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको विभिन्न ठगी तथा घोटाला र यसको न्यीिनकरणका लागि एकदिने सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ । नेशनल बैङ्किङ्ग ईन्ष्टिच्युट लिमिटेडले फागुन २७ गते उक्त सम्मेलनको..
​सिटिजन्स बैंकले विद्यालयलाई ल्यापटप दियो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले शिक्षा क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले महोत्तरी जिल्ला औरहीस्थित प्रसादसिंह माध्यामिक विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्वस्वरुप एक थान ल्यापटप वितरण गरेको छ । विद्यालयका प्रध्यापक शिवशरण यादवलाई ल्यापटप हस्तान्तरण..
​प्रभु बैंकको शाखा गोरखामा, दोहोरिएका शाखा स्थानान्तरण गर्दै
काठमाडौं । प्रभु बैंकले गोराखाको पृथ्विनारायण नगरपालिकामा शाखा विस्तार गरेको छ । शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलले उद्घाटन गरे । बैंकले धादिङ बेशीमा रहेको तत्कालिन प्रभु विकास..
नेपाल एसबीआईको तीन नयाँ बचत योजना
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैङ्कले तीन नया“ बचत योजना ल्याएको छ । बैङ्कले एनएसबीएल बाल बचत, ‘कर्णधार बचत र एनएसबीएल कोम्बो सेभिङ योजना ल्याएको हो । बालबालिकामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि..
​नेपाल बंगलादेश बैंकको २९ औं शाखा किर्तिपुरमा
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले किर्तिपुर ट्यांलाफाँटमा २९ औं शाखा खोलेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन संविधानसभाका सभासद् राजेन्द्रकुमार केसीले बुधबार गरेका थिए । किर्तिपुरसहित बैंकले २९ शाखा, २ एक्सटेन्सन काउन्टर,..
प्रभु बैंकले हकप्रद शेयर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत
काठमाडों । प्रभु बैंकले निस्काशन गिर्ने हकप्रद शेयरलाई १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाएको छ । प्रभु बैंकको संचालक समितिको बैठकले यसअघि साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयरको अनुपात १० प्रतिशतको सट्टा २०..
माछापुच्छ्रे बैंकको महोत्तरीमा ५६औं शाखा, ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप
काठमाडों । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले महोत्तरीको मटिहानी बजारमा शाखा खोलेको छ । बैंकको यो ५६औं शाखा कार्यालय हो । शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोले गरेका हुन् । दुई अर्ब..
सिभिल बैंक र मर्सिकोर बीच सम्झौता
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड र मर्सिकोरले एक कार्यक्रमबिच सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर मर्हजन र मर्सिकोरका राष्ट्रीय निर्देशक संजय कार्कीले हस्ताक्षर..
एकता विकास बैंकको दशौं शाखा महाराजगञ्जमा
काठमाडौं । एकता विकास बैंक लिमिटेडले कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा शाखा विस्तार गरेको छ । शाखाको बैंकका अध्यक्ष डा. ध्रुवप्रसाद ढकालले उद्घाटन गरे । यो सहित बैंकका शाखा संख्या १० पुगेका छन् ।..
​सिभिल बैंकको ‘५५५ मुद्दति पत्र’ खाता, ब्याज दर ७.०७ प्रतिशत
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले नयाँ निक्षेप योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंक पाँच बर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा ‘सिभिल ५५५ मुद्दति पत्र’ निक्षेप योजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो । न्युनतम पाँच लाख..
कर्णाली बिकास बैंकको २५ प्रतिशत बोनस शेयर, चैत्र ७ गते साधारणसभा
काठमाडौं । कर्णाली बिकास बैंकले लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक संचालक समितिको बैठकले दशौ र एघारौ साधारणसभा एकसाथ गर्ने निर्णय गरेको हो । बैकको..
काठमाडौं । रेमिट्यान्स क्षेत्रमा आएको छोटो समयमा बेष्ट रेमिट नेपालले आफ्नो सञ्जाल देश तथा विदेशमा बिस्तार गरिरहेको छ । यसै क्रममा वेष्ट रेमिटले भर्खरै यूएईमा रहेको नेशनल एक्सचेञ्ज कम्पनीसँग रेमिट्यान्स..
एनएमबि बैंकको सुलभ कर्जा योजना, तीन दिनमै ऋण दिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले साना तथा मध्यम वर्गका उद्यमीका लागि सुलभ कर्जा तथा पर्सनल बिजनेस लोन नामक दुई कर्जा सेवा सुरु गरेको छ । सुलभ कर्जाअन्तर्गत पाँच लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख..
​टुरिजम बैंकले ल्यायो आकर्षक बचत र मुद्दति खाता
काठमाडौं, फागुन ७ गते । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले छैठौं वर्ष प्रवेस गरेको अवसरमा आकर्षक बचत र मुद्दति खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले किड पिग्गी खाता, आदरणीय बचत खाता र..
Results 1896: You are at page 60 of 64